Mamwe Madzimai ekuZimbabwe Obatwa seNhapwa neKubatwa Chibharo kuOman
Kurume 29, 2022
Mamwe madzimai ekuBurundi aibatwawo senhapwa kuOman
Hurumende inoti iri kushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda nekugara kuOman, uye inoti ine hurongwa hwekubatsira vose vari kunyika iyi vanoda kudzoka kumusha.
Hurumende yazivisa kuti kune madzimai gumi nemasere ari kuOman ari kuda kudzoka kumusha sezvo ari kubatwa senhapwa munyika iyi.
Izvi zvaziviswa nemunyori mubazi rinoona nezvemukati menyika, VaAaron Nhepera, avo vati kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana zviri kubatwa senhapwa kunyika iyi.
Vachitaura mushure mekusangana kwemapazi akasiya-siyana ehurumende achizeya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi, VaNhepera vati madzimai aya akaenda kuOman achifunga kuti kune mafuro manyoro.
VaNhepera vati madzimai aya asvika kuOman, iyo iri kuMiddle East, anoshanda achishungurudzwa zvakanyanya .
VaNhepera vatiwo pamusoro pekunonunura vari muhutapwa ava, hurumende ichaenderera mberi nekupa madzimai aya rubatsiro rwekuti agadzikane mupfungwa kana achinge adzoka kumusha pamwe nekuatsvakira mari yekuti awane zvekuita munyika.
Vayambirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitange zvanyatsoongorora pamwe nekubvunzisisa kana zvawana mabasa kunze kwenyika. Vatiwo hurumende ichange ichiitawo dzidziso kune veruzhinji nezvenyaya iyi.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen Action Group, Amai Edna Masiyiwa, vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nekushungurudzwa k
uri kuitwa madzimai ari kunotsvaka mabasa kunyika dzakadai seOman.
Amai Masiyiwa vati zvinhu hazvina kumira bzvakanaka munyika munyaya dzehupfumi izvo zviri kuita kuti veruzhinji vangoti chamuka inyama.
Vatiwo panoda dzidziso yakasimba yekuti vanhu vanzwisise njodzi iripo pakuenda kunoshandira kunze kwenyika kunyanya kunyika dzinozivikanwa pasi rose kuti hadzibate zvakanaka kodzero dzevanhu. Vatiwo hupfumi hwenyika dai hwagadziriswa.
STudio7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeOman panyaya iyi, sezvo tisina kubata mumiriri weOman muZimbabwe, uyo asingagari muZimbabwe, VaMubarak bin Salem Al Zakwani, kuti tinzwe divi ravo.